Waa maxay awoodda qarsoon ee dhabarka nofollow?
Dhamaan websaydhadu waxay ku andacoodaan waxyaabo isku mid ah. Xidhiidhada Dofollow waxay faa'iido u leeyihiin ujeeddada boggaga, halka nofollow aan faa'iido lahayn. Si kastaba ha noqotee, taasi maahan dhab ahaan. Waxay u muuqan kartaa mid xaq u leh kiis markaad kaliya ka walwalsan tahay isku xirka sinaanta tooska ah. Wakhti dheer, qaabkani macnihiisu waa inaad lumisid waxyaabo badan oo isku xirnaan kara dhisida oo aad ka heli kartid dib u soo laabasho.
Waxaa lagu sharxi karaa dhowr arrimood oo kala duwan. Ugu horreyntii, Google ayaa wali daneeya xidhiidhada nofollow oo waxay u arkaan inay muhiim u tahay hagaajinta sumcadda sumcadda. Waxay fiiro gaar ah u leedahay bog internetka ah oo dib-u-hagaajin ah markaad isku dayeyso inaad soo koobto haddii aad leedahay hannaan xiriiriye caafimaad iyo tayo leh ama. Waxaa intaa dheer, backlinks nofollow weli weli la indexed, kaas oo ka caawiya hubinta in ilaha webka waa nool yahay. Nofollow backlinks waxay door weyn ka qaadataa faa'iidooyinka suuq-geynta.
Sidee Google uga jawaab celiyaa dhabarka danbe?
Xaqiiqo ayaa loo sheegaa, Google waxay ku kala duwan yihiin labada garab iyo taakuleenta. Iyada oo farqiga kaliya ee tayada juice isku xiran, waxay ka gudubtaa iyada oo loo marayo backfoot nofollow. Google wuxuu tixgeliyaa xidhiidhada nofollow iyada oo qayb ka ah astaanta caafimaad ee backlink. Haddii faahfaahinta gadaashu ay ka kooban tahay kaliya dib u celi, waxay u muuqataa wax laga shakiyo mashiinnada raadinta. Noocyada noocan oo kale ah waxay heli karaan ciqaab. Sidaa awgeed, xiriirinta nofollow waa shabakad badbaado leh oo haboon.
Faa'iido kale oo dib u qabsasho ah waa in ay ka caawiyaan farsamooyinka raadinta raadinta iyo muujiyaan boggaaga. Xiriirinta Nofollow waxay si dhakhso ah u geyn kartaa Google si ay u kala saaraan mid ka mid ah boggaga internetka ee aan helin taraafikada ka hor. Maxay muhiim u tahay halkaan ku xiran tahay in xiriirada nofollow ay weli hubiyaan in matoorada raadinta ay heli karaan, raadinayaan iyo taxan karaan goobtaada, xitaa haddii aysan ka gudbin sinaanta ama sameynta qoraalka ereyada muhiimka ah.
Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la sheego in xiriirada nofollow ay noqon karaan walaac si ay u saameyso. Dad badan oo websaydh ahi waxay diidaan in ay la shaqeeyaan goobaha gadaashooda ah ee nofollow-ka ah maadaama ay u maleynayaan inayan wax tarin karin horumarinta ganacsigooda. Dhibaatadu waxay tahay in aysan arag wax qiimo ah oo ka dambeeya isku xirka nofollow. Haddii aad daabacdo waxyaabo aad u ballaaran oo ka mid ah mishiinka kaas oo bixiya kaliya isku-xireyaasha nofollow, weli wali waxay faa'iido u tahay adiga oo isticmaala kuwa soo hela waxyaabaha ku haboon iyo tayadaada, waxay ku wadaagi doonaan goobahooda yar. Sidaa darteed, natiijo ahaan, waxaad weli heli doontaa waxyaabo badan oo dabiici ah oo dabiici ah.
Sidaa daraadeed sababta xiriirada nofollow aysan u gudbin karin isku-dheellitirnaanta isku-dheelitiga habka badan ee anaga oo fahamsan, laakiin wali waa qiimo u laheyd shabakadayada raadinta moobiilka. Shaki kuma jiro in dib-u-soo-celin aan fiicnayn hagaajin bogga SERP. Iyo soo-gaadhista, xilligeeda, waxay keeni kartaa isku-socodsiin badan oo gaadiidka ah oo la xidhiidha boggaaga.
Si aan u dhammaystiro Waxaan jeclaan lahaa in aan sheego in dib u qaabeynta dhabarka ay noqoto mudnaanta ugu sarraysa, laakiin waa inaadan diidin fursadaha xiriirka leh nofollow nofollow. Xidhiidhyadani waxay sidoo kale leeyihiin awood ay ku caawiyaan soo dejinta iyo abuurista xiriirro dheeraad ah Source .